Hogaamiyeyaasha iyo Wakhtiyada Adag - Tilmaan Media
Wakhtiyada xaalku caadiga yahay waa laga yaabaa in hogaamiyuhu isku dayo in bal wax uusan ahayn yara muujiyo isaga oo ka jawaabaya xaalad gaar ah ama qaadanaya talooyinka lataliyeyaashiisa. Lkn Xaqiiqada dhabta ah ee hogaamiyuhu waxay si aan mugdi ku jirin usoo ifbaxdaa marka dhibaato wayni dhacdo, maxaa yeelay markaan wakhti looma hayyo iska yeelyeel.
Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa labo hogaamiye oo kala ah haweenayda raysal-wasaaraha ka ah dalka New Zealand Jacinda_Ardern iyo madaxwaynaha Maraykanka Donuld_Trump sida ay umaareeyeen labo caqabad oo dalalka ay hogaamiyaan soo foodsaartay.
1-New_Zealand waxaa ka dhacay fal argagixiso oo aad ufool xun bishii Maarso, 2019. Waxaa masjid kuyaalla magaalada Christchurch nin cunsuri ah ku toogtay dad muslimiin ah isaga oo dilay in kabadan 51 qof halka tiro kale oo badanna ku dhaawacantay.
Arrintaan waxay dhalisay caro iyo naxdin, aad baana loo cambaareeyay, lkn waxaa xusid iyo ammaan mudan sida gabadha raysal wasaaraha ka ah dalkaas Jacinda Ardern ula fal-gashay dhacdadaas foosha xun.
– Waxay aad ula tacaaduftay dadka muslimiinta ah ee lalaayayay , waxaa lagu dhawaaqay maalmo baroor diiq ah, addinka ayaa meelo badan laga shiday, xittaa ayaa waxay xiratay marada dumarka muslimiintu madaxa saartaan, baarlamankuna wuxuu meel mariyay qawaaniin la xiriirta, isir nacaybka iyo haysashada hubka.
– Tallaabooyinka ay rasalwasaare Jacinda Ardern qaadday waxay raalli galiyeen dadka muslimiinta ah meelkasta oo ay joogaan, gaar ahaan dadka eheladoodu ku dhimatay falka argagixiso. Waxay furtay albaab cusub oo dulqaad iyo isjacayl u horseedi karta dadka dalkaas kunool.
– Haddii aysan Jacinda Ardern sidaan u dhaqmi lahayn waxaan shakki ku jirin in wakhti dheer qalalaanse iyo is nacayb xoog badan dalkaas ka sii jiri lahaa.
2- Dalka Maraykanka bishii May,2020 waxaa ka dhacay fal aad ufoolxun oo gilgilay quluubta aduunyada oo dhan. Falkaas waa dilka uu lowgiisa inta surka kasaaray nin boolis ahi George Floyd oo nin madaw Maraykan ah nafta kaga saaray isagoon u aabbe yeelin cabaadka kayeerayay kahor intuusa dhiman.
-Dhacdadaani waxay horseedday in Maraykanka ay ka dhacaan mudahaaraadyo rabshado watta oo looga soo horjeedo sida ay boolisku ula dhawmaan dadka madawga ah. Laguna dalbanayay isbadallo lagu sameeyo qaabdhismeeda iyo habdhaqanka booliska.
-Waxaa sii huriyay waa habdhaqanka Donuld Trump oo aan sidii ku haboonayd uga garaabin waxa dhacay, balse wuxuu aflagaadeeyay cambaareeyna usoo jeediyay mudaharaadeyaasha, wuxuu ku hanjabay in millatariga adeegsanayo haddaan la joojin. Mudaharaadyada rabshadaha wattaa wali way socdaan, waxayna ugudbeen dalalkale.
-Hadal kasta iyo ficil kasta oo Donuld Trump kasoo baxaa xaalka ayuu uga sii darayaa, dhibkuna waa sii badanayaa. Waana kasoo horjeedka tallaabooyinka ay qaaday Jacinda Ardern oo tallaabo kasta oo ay qaaday ay qayb ka noqotay dajjina xaaladaha.
-Donuld Trump iyo lataliyeyaashiisuba waa ogyihiin in habka ay u dhaqmeen xaalka uga sii daray in labadalaana haboontahay lkn madaxwaynuhu kama leexan karo qiyamka uu rumaysan yahay, dabeecadihiisa iyo siyaasadaha uu kusoo caano maalay si uu xilka madaxwayne ugaaro.
-Sidaas darteed bulshooyinku marka horaba waa in ay doortaan dad caafimaad qaba kuwaasoo marka xaaku adkaado lasoo shirtagi karo dhaqammo iyo siyaasdo ku habboon xaaladda adag ee jirta.
UN: 244 kufsi ayaa sanadkii tagay ee 2019 ka dhacay Soomaaliya